FlashScore 3.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား အားကစားမ်ား FlashScore
FlashScore ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
• MATCH PREVIEWS AND RECAPS: Stats are important, but they don't tell everything. This is why you can findadetailed preview for every match in the most popular leagues - and also the post-match reports.
FlashScore နှင့်အတူ, သငျသညျအစဉျအမွဲနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ခုတည်းရည်မှန်းချက်လွဲချော်မည်မဟုတ်။ ရုံကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသည့် 6000+ ပြိုင်ပွဲမဆိုအတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးပွဲအသင်းများသို့မဟုတ်ကစားသမားကိုရွေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပေးချက်များကိုထို့နောက်သင်ပွဲအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအရေးကြီးသောအခိုက်အကြောင်းကိုသိစေပါလိမ့်မယ်။
• GREAT လွှမ်းခြုံ: သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ထဲမှာဘောလုံး, တင်းနစ်, ဘတ်စကက်ဘော, ဟော်ကီ, ရပ်ဂ်ဘီ 33 နဲ့အခြားအားကစားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 6000+ ပြိုင်ပွဲကိုဖုံးလွှမ်း - သင်တစ်ဦးတည်း 1200+ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုလိုက်နာနိုငျပါသညျ!
• SPEED: တစ်ရည်မှန်းချက် ထား. ထုတ်ပေးသွင်းယူ, အနီကဒ်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပါသည်, သင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပရိသတ်ကိုအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုသိပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်လွဲချော်တွင် MATCHES သို့မဟုတ်မွမ်းမံ NO
•အကြိုက်ဆုံးအသင်းများနဲ့ကိုက်ညီ: သင်၏အချိန်ဖြုန်း, သာသင်အကြိုက်ဆုံးပွဲအသင်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲကိုလိုက်နာမထားပါနဲ့။
• Notification နှင့် Alert: ပွဲစဉ်, စတင်သည်လိုင်း-ups, ပန်းတိုင် - သင်ပြန်မဆိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။ ကိုယ့်သင်အကြိုက်ဆုံးပွဲကို select နှင့်သင်သိပါစေရန်သင့်မိုဘိုင်း device ကိုစောင့်ပါ။
• SYNC နေထိုင်: သင်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်, သင့်ကွန်ပျူတာအကြားအကူးအပြောင်းလိုပါသလား ကြှနျုပျတို့သညျဤအဘို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်: မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူအဖြစ်သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ကိရိယာများကိုဖြတ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏အားလုံးမြင်လိမ့်မည်။
စားပွဲ, MATCH အသေးစိတ်
•တိုက်ရိုက် Commentary: TV ပေါ်မှာပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး? အဘယ်သူမျှမပြဿနာ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစာသားကိုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့။
• LINE-UPS နှင့်ဦးခေါင်း-to-HEAD: သင်ပွဲစတင်သည်ရှေ့တော်၌ထိုလိုင်း-ups ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသလား ကျနော်တို့ကြိုတင်မှာသူတို့ကိုရှိသည်။ ထိုအခေါင်းကိုလည်း-to-ခေါင်းကိုသမိုင်းသင်နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုအတိတ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကစားကြပုံကိုစစျဆေးနိုငျဒါ။
•တိုက်ရိုက် table: တစ်ခုမှာရည်မှန်းချက်တွေအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်သွင်းယူရည်မှန်းချက်လိဂ်အဆင့်အဖြစ်လက်ရှိထိပ်တန်းဂိုးသွင်းစားပွဲပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်သောကျောက်ပြားကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
• MATCH Preview နှင့်ပြန်လည်စုစည်းမှု: Stats ကတော့အရေးကြီးလှသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အရာရာပြောပြကြဘူး။ နှင့်လည်း Post-ပွဲစဉ်အစီရင်ခံစာများ - သင်လူကြိုက်အများဆုံးလိဂ်တိုင်းပွဲစဉ်များအတွက်အသေးစိတ် preview ကိုရှာတှေ့နိုငျအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
FlashScore အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FlashScore အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FlashScore အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
FlashScore အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 158.71k 65.11M
FlashScore ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FlashScore အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.4.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.livesport.eu/terms/flashscore_com/
Release date: 2019-08-26 21:10:07
လက်မှတ် SHA1: FD:9F:BF:3B:2D:AC:23:90:35:5B:54:C5:0A:1B:71:60:76:D7:9B:C1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pavel Cvetler
အဖွဲ့အစည်း (O): LiveSport s.r.o.
နယ်မြေ (L): Prague
နိုင်ငံ (C): CZ
FlashScore APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ